UShauwn ukhala ngeminyaka yasemshadweni
UShauwn Mkhize osenohlelo olukhuluma ngempilo yakhe oluqale ukukhonjiswa kwithelevishini kuMzansi Magic olusihloko sithi Kwa Mam’Mkhize.
THOKOZANI NDLOVU | January 14, 2020
UHLELO lwethelevishini olukhuluma ngempilo yakhe, uShauwn Mkhize lumnike ithuba lokugonyuluka ngothando lwakhe lweminyaka ewu-25, eshade nendoda abeyithanda kodwa yona athi ibizithanda yona.
UShauwn Mkhize usho lokhu ngemuva kokuthi uhlelo olukhuluma ngempilo yakhe luqale ukukhonjiswa kwithelevishini kuleli sonto kwiMzansi Magic Kwa Mam’Mkhize.
Ukhulume naleli phephandaba esendaweni yobumnandi lapho abememe khona izicukuthwane eMlaza kwaMax’s Lifestyle.
Uveze ukuthi uchithe iminyaka engu-25 "nephoyisa likamasipala" waphoqeleka ukuthi ayozishintsha nesibongo eMnyangweni wezaseKhaya njengoba ethi, ubethanda uSbu kodwa umyeni wakhe ezithanda yena kuphela.
Ukhale ngokuthi uSbu uthathe izinto ezithinta umndeni waziyisa emaphephandabeni.
“Umndeni wethu ubungahlangene nezinto ezithinta amaphephandaba kodwa yena wawuthatha wawusondeza kuwona.
Yingakho kubalulekile ukuthi abantu baqonde manje ukuthi ungubani uMaMkhize kunalokhu abebefunda ngakho emaphephandabeni, lapho mina obekungazwakali ukuphawula kwami kuwona,” kusho uShauwn.
Ugcizelele ukuthi okuningi ngeke akudalule okwamanje ngoba lokho kungadala ukuthi abantu bagcine bengasalubuki uhlelo ekubeni kuningi okusazovela kulona ngeqiniso lempilo yakhe.
Ube esephawula ngobudlelwano bakhe noSbahle Mpisane, oyindodakazi yakhe angayizali, athe kakulona iqiniso ukuthi akabanga yingxenye yempilo yayo njengoba esanda kuba sengozini yemoto emehlele nyakenye.
UMPHATHI weMax’s Life Style, uMax Mqadi, umlingisi wemidlalo yethelevishini uRami Chuene, Andile Mpisane noShauwn Mkhize ngesikhathi kwethulwa uhlelo lwethelevishini, olukhuluma ngempilo kaMaMkhize obengunkosikazi kaMpisane
Uthe ubehlale embheka sonke isikhathi abuye aye nasesibhedlela ukuyombona ngoba lokho kungumsebenzi wawo wonke umzali ukubheka izingane zakhe.
Uthe namanje bahlala bonke. USbahle obekhona eMax’s Lifestyle, ukhombise ukuthokozela obekushiwo wuMaMkhize ohlelweni lwethelevishini.
Leli phephandaba libuye labuza uMaMkhize ngobudlelwano anabo nendodana yakhe u-Andile obekubukeka sengathi sebeqhelelene njengoba esehamba nabanye abantu kunayo.
Uthe u-Andile usesigabeni sokuthi naye azithole ukuthi uzimisele ngokwenzani empilweni njengoba engumdlali webhola abuye abe ngumculi ekubeni usafunda futhi.
Uthe usazama ukuthi amnike isikhathi sakhe kodwa uyameseka kukhona konke akwenzayo kodwa ngeke ahambe naye ezindaweni zobumnandi basebusuku.
Uveze ukuthi ngisho emculweni wuyena oyimenenja ka-Andile njengoba indodana yakhe ibhukhwa kuyena.
Ebuzwa ukuthi usekhona yini umuntu athandana naye njengoba esehlukene noMpisane, uvele wangawuphendula lowo mbuzo. Kodwa wamoyizela, wacela ukuhamba ekhala ngokuthi baningi abasafuna ukukhuluma naye.